Qarax baas oo dilay dagaalyahanada mucaaradka dalka Syria – The Voice of Northeastern Kenya
Qarax baas oo dilay dagaalyahanada mucaaradka dalka Syria
Ugu yaraan 25 ruux ayaa lagu dilay halka 25 kalena ay ku dhaawacmeen kadib marki u ruux isku xiray qarax miidamin ah ee ka dhacay goob basaska rakaabka ah laga raco ee kuyaala gobolka Idlib ee dalka Syria kaas oo ku teedsan waddanka Turkiga.
Hay’ada u dooda xaquuqda aadanaha ee duusha kala socota xadgudubyada ka dhanka ah baniaadanimada ee ka dhaca waddanka Syria ayaa waxa ay sheegtay in qaraxaas lala eegtay baas ay saarnaayen dagaalyahanada mucaaradka dalka.
Televishanka CNN qeybtiisa Turkiga oo soo xiganeysay ilaa wareedyo ku sugan aaga u qaraxa ka dhacay ayaa waxa ay sheegtay in u qaraxa ka dhacay afaafka hore ee xerada qaxootiga Atmeh ee ku taala gobolka Idlib waqti dambe ee maalinta axada.
Dawladda Turkiga ayaa durbadiiba marka u qaraxa dhacay aagaas u dirtay gawaarida gurmadka deg dega ah ee loo yaqaano Ambulaaasta waxana ay gawaaridaas halkaas ka soo qaaden 8 kamid ah dagaalyahanada mucaaradka ee halkaas ku dhaawacmay waxana lagu dabiibaya isbitaalada ku yaala gobolka hatay ee waddanka Turkiga halka kuwa kale ee iyagana ku dhaawacmay qaraxaas iyagana xaaladooda lagula tacalayo isbitaalada kuyaala waddanka Syria.
Maamulka gobolka Hatay ayaa warbixin ay maanta soo saaren waxa ay ku sheegen in 4 kamid ah dadka gobolkaas lagu daaweynaayay ay marki dambe u geeriyooden dhaawacyada ka soo gaaray qaraxaas.
Idlib ayaa ah gobol xaruun u ah mucaaradka dalka Syria ee ka soo horjeeda xukumadda Dimishiq.
Waxana hay’adan kor kala socota xadgudubyada ka dhanka ah baniadanimada waddanka Syria ay sheegtay in maalinti shalay ahayd oo kaliya dalkaas laga soo tabiyay 26 dhacdo oo ah duqeymaha dhinaca cirka ah ee gobolka Idlib laga fuliyay.
Ugu yaraan 90 ruux ayaa waddankaas maalinta jimcaha ahayd oo kaliya lagu dilay halka 83 ruuxna habeenka sabtida la dilay waxana dilalkaas intooda badan ay ka dhacayn gobolka Allepo.
Hay’adan ayaa warbixin ay maalinta shalay ahayd soo saartay waxa ay ku sheegtay in 15-ka bari ee ugu dambeeyay ay isku dar dar 327 qof ay waddanka Syria ku geeriyooden waxana 76 kamid ah dadkaas ay ahaayen carruur halka 41 ay ahaayen haween.
100 kamid ah dadkaas la dilay ayaa waxa ay ku dhinteen duqeymaha dhinaca cirka ah ee ay diyaaradaha ay dawladda leedahay geysteen halka 126 qofna ay ku dhinteen weerarada ay mucaaradka ku soo qaadan goobaha ay dawladda gacanta ku heyso ee gobolka Allepo.
← Tobaneeya qof oo ku geeriyooday weerar ay falaago ka so horjeeda dawladda DR Congo waddankaas ka geeysten
Nin iyo gabadhiisa oo ay dadweyne dileen →